Amagama amakhosazana eDisney: yazi imbali yawo | Ndinike ixesha lokuphola
Kukho ilizwe lemilingo esithe sachanabekwa kulo malunga nokuzalwa kwethu: Ndithetha umhlaba weDisney kunye nenqwaba yabalinganiswa abenziwe bayijikeleza. Akunakuphepheka ukudibanisa istudiyo neenqaba ezinomtsalane, intelekelelo, iihambo kwaye, ewe, amakhosazana aseklasikhi. Yazi onke amakhosazana eDisney kunye nembali yawo kweli nqaku. Amakhosazana eDisney amele eyona franchise ibaluleke kakhulu yeNkampani yeWalt Disney.
Sineenqwaba zeefilimu zoopopayi abanamaqhawe abo angabafazi abancinci abanamabali ahlukeneyo asifundisa amaxabiso anje ngobuhlobo, isibindi, ububele, ukuzimela, ukuhlonipha abanye abantu kunye nomlo wothando lokwenyani, ukubala ezimbalwa imizekelo. Nangona kukho impikiswano malunga nokutolikwa kwebali ngalinye, asinakukhanyela ukuba amabali abo ayaziwa kwilizwe liphela kwaye baphawule iminyaka yokuqala yobomi bamantombazana amaninzi ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane ephelileyo. Kungenxa yoko eli xesha ixesha lokumiliselwa kwayo linikezelwe kwiscreen esikhulu, kunye nokuphononongwa ngokufutshane Kweli bali istudiyo semovie sagqiba kwelokuba silibalise.
Ngenxa yezizathu zorhwebo, isitudiyo sefilimu sahlula bonke abalinganiswa baso kwii-franchise. I-Disney Princesses yaqala ngo-1937 kwaye yenziwe ngoonobumba abalishumi elinanye ukuza kuthi ga ngoku: I-Snow White (1937), uCinderella (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Tiana (2009), Rapunzel (2010) kunye neMérida (2012).
1 Ikhephu elimhlophe
12 Baphi abanye iiNkosazana zeHlabathi zeDisney?
Kwakunjalo eyokuqala weenkosazana zeDisney ezaziziswe luphononongo isikrini esikhulu ngo-1937 kwaye oko kwakumele ukumiliselwa kwelungelo lokuthengisa.
Yenziwe ngu Abazalwana bakaGrimm, U-Snow White uyinkosazana encinci kakhulu enentliziyo enkulu: Uyakuthanda ukuhlala nendalo kunye nezilwanyana kwaye wayehlala enqabeni noninazala ongendawo owayesoloko eziva esongelwa. Ibali liyavela xa umama wesibini okhohlakeleyo ehlola isipili sakhe sobugqi kwaye etyhila ukuba ubuhle bakhe buye bagqitha baloo ntombi yakhe yesibini. Ukumkanikazi okhohlakeleyo uyaphambana ngomona kwaye agqibe kwelokuba aphelise u-Snow White ukuphinda abuyele kwisihloko somfazi omhle ebukumkanini; i-vassal ephetheyo ayinakuwugqiba umsebenzi ophathisiweyo kwaye icebise inkosazana ukuba ibaleke ingaze ibuye.
I-Snow White iqala uhambo Apho adibana khona nabafazi abasixhenxe abanobuntu obukhethekileyo, ngoko nangoko baba ngabahlobo abasenyongweni kwaye bagqiba kwelokuba bameme ukuba ahlale nabo. Yonke into yayihamba ngokumangalisayo, kude kube lusuku olunye olubi, ukumkanikazi ufumanisa indawo yakhe yentombazanana kwaye uvela emnyango wakhe efihliwe njengexhegwazana elidinga umntu wethu ophambili onosizi ngaye. Ngombulelo, njengenxalenye yesicwangciso esibi, ixhegwazana livuza umvuzo wakhe kwaye limnike iapile, eyayityhefu. Njengoko bekulindelekile, ekulungeni kokuqala eli bhinqa liselula liza kuwa lize lilale ubuthongo obunzulu elingenakuze livuke kulo.
Xa abahlobo bakhe babuya emsebenzini emgodini, bafumanisa umzimba ka-Snow White kwaye balandela ixhegokazi, elisweleka emva kokuwa eweni. Bengakulungelanga ukumngcwaba, amakhwenkwe asixhenxe agqiba kwelokuba ahloniphe umhlobo wawo kunye nobuhle bawo kwiglasi yeglasi apho bezisa iintyatyambo yonke imihla. Kungekudala emva koko, kwavela iNkosana uFlorian owayehlala emthanda naye. Xa eshukunyiswa ukuba abone intombi yakhe eguqulweyo, uthatha isigqibo sokumanga ngokumvusa kubuthongo obunzulu.
Iphambili yefilimu yenzeka ngo-1950 kwaye umlinganiswa wadalwa ngu UCharles perrault nangona kunjalo eyona nguqulelo idumileyo yentsomi yapapashwa ngu Abazalwana bakaGrimm.
Ibali lithetha ngentombazana encinci eyinkedama yomama kwasekuzalweni kwaye yayiphantsi kolawulo lukayise othandekayo, owafa kwiminyaka kamva. UCinderella wasala elugcinweni kukamama wakhe wesibini Kwaye kwanyanzeleka ukuba akhathalele umsebenzi wasendlini kwaye anelise iimfuno zoomama bakhe. Ngethemba lehlabathi elingcono, wayehlala ezabalazela ukubona icala eliqaqambileyo lobomi; Ngaphandle kwemisebenzi yekhaya enzima yemihla ngemihla, uhlala ewonwabile kwaye ezele bububele.
Ngelo xesha, ukumkani wagqiba kwelokuba lixesha lokuba unyana wakhe okuphela kwakhe atshate. Ke waququzelela ibhola enkulu ebhotwe ukuba akhethe umfazi wakhe wexesha elizayo, zonke iintombi zobukumkani zabizelwa kumnyhadala. UCinderella walungiselela eyona lokhwe yakhe intle ukuba azimase yona, nangona kunjalo oomama abathandekayo kunye nomama ongendawo bayitshabalalisile ilokhwe yakhe ukuphelisa amathuba okuzimasa lo msitho kuba ubuhle bakhe buwathathile amathuba. Ebuhlungu yintliziyo, uqala ukulila kabuhlungu.
Kwimizuzu kamva kuvela uthixokazi wakhe wasentsomini, othuthuzelayo ngomlingo ngentonga yakhe yomlingo aze atshintshe amadlavu awayenxibe ngawo abe lelona lokhwe lihle wayenokucinga ngalo. Ikwanguloo mntu weza ekhatshwa zizilayipha zeglasi eziqaqambileyo kunye nenqwelwana ekhazimlayo; nangona kunjalo ukupela kwakwexeshana kwaye kuya kuphela ezinzulwini zobusuku. Ngokucacileyo, nje ukuba inkosana ibone uCinderella engena kwigumbi, wothuswa bubuhle bakhe kwaye uyimema ukuba idanise. Emva kokuhamba ujikeleze ibhotwe kwaye wonwabele ingokuhlwa kunye nenkosana enomtsalane, UCinderella uva iiyure ezilishumi elinambini chimes kwaye ngaphandle kwengcaciso engaphezulu, uqala abaleke aye enqwelweni. Inkosana ilandela emva kwakhe kwaye izama ukumnqanda ngaphandle kwempumelelo, ekuphela komkhondo wakhe owawushiyekileyo yayikukutyibilika okuwe ngengozi ngexesha lokubaleka.
Ukuwa eluthandweni nomfazi oyimfihlakalo, inkosana iyalela ukuba ikhangelwe kwaye inyanzele abakhonzi bakhe ukuba bamfune kulo lonke ubukumkani. Ucele ukuba isiliphu sizanywe kuwo onke amantombazana ebukumkanini. Emva kothotho lwamashwa ekufuneka uCinderella adlule kuwo, inkosana ekugqibeleni iyamfumana kwaye iyamcebisa. Le yindlela umlinganiswa ophambili kuthi abe yinkosazana ngalo mzuzu.
Yaziwa ngcono ngokuba Buhle bokulala, ibiyi Ibali elaqala ngo-1959 kwaye lenziwa nguCharles Perrault kwaye kamva yahlengahlengiswa ngabazalwana uGrimm.
Kwisiqwenga somzi esiqalekisweni sika-Aurora omncinci, oselusana, uyathakathwa nguMaleficent okhohlakeleyo owayemisele inkosazana ukuba ilale ubuthongo obungunaphakade xa wayeneminyaka elishumi elinesithandathu kwaye wayehlatywa ngentonga yevili elijikelezayo. Isiqalekiso sinokulungiswa kuphela ngokwanga kothando lokwenene.
Ukumkani, ngelinge lokuzama ukukhulula intombi yakhe kwishwangusha elinje, wathumela intombazana encinci ukuba iphile nabantu abathathu: Izityalo, iPrimavera kunye nezilwanyana. Ngubani owakhulisa u-Aurora njengomtshana kwaye wamfihla kooyise bokwenyani. Ngentsasa yokuzalwa kwakhe kweshumi elinesithandathu, oosomashishini bathumela u-Aurora ukuba aqokelele amaqunube ukuba alungiselele ikeyiki kwaye kulapho wadibana khona neNkosana uPhilip eyayizingela ehlathini, yayiluthando ekuboneni okokuqala kwaye bavumelana ngokubonana kwakhona.
U-Aurora wasiwa kwibhotwe ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe kwaye amxelele inyani malunga nexesha lakhe elidlulileyo, nangona kunjalo uMaleficent wamqhatha wamthumela kwindawo ekude kwibhotwe apho ivili lokugqibela lobukumkani lalikhona. Yile ndlela esi siprofeto sazaliseka ngayo kwaye iNkosazana Aurora yalala ubuthongo obungunaphakade. Baye bagqiba kwelokuba bamkhusele kwinqaba enkulu ngokugcina i-rose ethangeni lakhe.
Iifiriiries zibekwe kwiNkosana uPhilip, njengoko beva amarhe okuhlangana okufutshane awayekunye no-Aurora. Ukanti wabanjiswa nguMaleficent ukuze angaze asenze isiqalekiso sakhe. Ngethamsanqa, ii-fairies zanceda uFelipe ukuba abaleke kuMaleficent oguqukele kwinamba eyingozi. Emva kwengxabano enzima, inkosana yaphumelela kwaye ekugqibeleni yakwazi ukudibana no-Aurora kwakhona ukuze amange aze aphendule isiqalekiso.
Intombi encinci kaKing Triton, iArieli yintombazana encinci, ubomi bayo phantsi kolwandle babugcwele ubumnandi. Ifilimu yakhe yakhutshwa ngo-1989 kwaye uphawu lwenziwa nguHans Christian Andersen.
Ukuthanda kwakhe umhlaba ngaphandle kolwandle, uthathe i-Little Mermaid ukuba iphonononge umphezulu kumaxesha amaninzi kwinkampani yabahlobo bakhe abasenyongweni uSebastián noFlounder. Ngenye yeendawo zakhe zokufika, uAriyeli wabona isiphepho esinamandla apho abasebenzi babesengozini. Kulapho ke wadibana khona no-Eric, inkosana entle awayeyigcinile wayizisa elunxwemeni lolwandle. Wathandana ekubonweni kokuqala kwaye waqala ukumculela. Ukufika kwenkosana, yayinethuba lokuyiva kwaye ibone ubuso bayo; nangona kunjalo uAriyeli kwafuneka abaleke imizuzwana kamva xa abanye abantu beza kuhlangula uEric.
Ukumkani uyakwalela iAriyeli ukuba ibuyele ngaphezulu; nangona kunjalo wayezimisele ukumfumana uEric. Kungenxa yoko le nto ehamba kunye nelona gqwirha linamandla elwandle: i-ularsula. Othembise ukumguqula abe ngumntu ngokutshintshiselana nelizwi lakhe elihle phantsi kwemeko enye: Ukuba ngomhla wesithathu emhlabeni akazange afumane ukwanga kwenkosana yakhe, uAriyeli angabuyela elwandle abe likhoboka lakhe. I-Mermaid encinci yamkela ngaphandle kwamathandabuzo kwaye yavela kwihlabathi langaphandle apho yakhawuleza yafumana uEric, uyabubona ngoko nangoko ubuso bakhe kwaye ubuza igama lakhe ukuba yeyiphi iAriel. Akakwazi ukuphendula njengoko wayengenalo ilizwi. Edanile, ucinga ukuba akangomfazi wakhe ongaqondakaliyo, kodwa ngendlela efanayo, uEric ubonelela ngendawo yokuhlala kwaye kulapho ukuhlala kunye kuvuselela umtsalane ovele kwintlanganiso yabo yokuqala.
Ngosuku lwesithathu kwabonakala umfazi ecula elunxwemeni lolwandle, okwangoku xa inkosana imva, utyhafile kwaye uthatha isigqibo sokumtshata kuba wayeqinisekile ukuba ngumfazi lowo wasindisa ubomi bakhe. Emva kokuva ezi ndaba, uAriel uyaphazamiseka. Umhlobo wakhe uScuttle, oyintaka yaselwandle, ufumanisa ukuba umtshakazi wexesha elizayo wayengu-Ursula. Ke uceba icebo lokulumkisa uKing Triton kunye nokonakalisa umtshato.
Embindini wesikhalazo esinezilwanyana zaselwandle, ukutshona kwelanga ngaphandle komtshato sele kugqityiwe kwaye uAriel no-Arsula babuyela kwifom yabo yantlandlolo. Okwalo mzuzu inkosana iyayiqonda impazamo yayo kwaye izama ukusindisa iAriyeli, nangona kunjalo bekude kwaye iAriyeli yayinesivumelwano sokuyihlonipha. UTriton ufuna inkululeko ka-Ariel kwaye unikezela ngokutshintsha indawo kunye naye. Ngovuyo, igqwirha liyabamkela kwaye babuthathe ubukumkani. Kwimizuzwana kamva uEric uvela kwaye wenzakalisa igqwirha ngeharhu, ebangela ingozi ephelisa ubomi besicaka sakhe. Ngokuvutha komsindo, i-Úrsula ikhula ngobukhulu kwaye iba sisidalwa esikhulu kwaye ibangele isaqhwithi ngesaqhwithi elwandle.
U-Eric no-Ariel basengozini, kodwa ngomzuzwana wethamsanqa, u-Eric ufumana inqanawa ezitshonileyo elawula ukuqhuba i-bowsprit ngomzimba ka-ularsula, ekugqibeleni ekufezekiseni ukufa kwakhe. Ngale nto, zonke iziqalekiso ezaphehlelelwa ligqwirha zazisuswa kwaye uKing Triton waphinda wakhululwa. Eqonda uthando lwenene olunentombi yakhe kunye nenkosana, uTriton unika uEric imvume yokutshata intombi yakhe, ke wajika iAriyeli yabuya yaba ngumntu ukuze baphile ngolonwabo ngonaphakade.
Ubuhle kunye nerhamncwa yakhutshwa kwimidlalo yeqonga ngo-1991 kwaye isekwe kwibali elenziwe nguJeanne Marie Leprince de Beaumont.
U-Bella ngumfazi okrelekrele kakhulu kwaye onamabhongo ongonelisekanga zizinto azinikwa lihlabathi eliwangqongileyo; Uhlala notata wakhe uMaurice kwaye ulikhoboka lokufunda. UGastón ligama lommangaleli wakhe, ungumzingeli owaziwayo uBella uhlala ewala. Ifilimu iqala kwakudala, inkosana eyazingcayo yohlwaywa ngumthakathi omdala xa eqonda ukuba kwakungekho nto ilungileyo entliziyweni yakhe: Uyiguqula ibe sisilo kwaye uphosa inqaba yakhe yonke, kubandakanya wonke umntu ongaphakathi kuye. Ekuphela kwendlela yokwaphula isipelingi kukwenza umntu athandane naye ngaphambi kokuba iros enchanted igqibe ukubuna.
Kwelinye icala, utata kaBella ubanjiwe kwibhotwe elikhuselweyo. Uya kumhlangula kwaye axoxisane nesilwanyana ngokutshintsha inkululeko yakhe kuyise. Isivumelwano sivaliwe kwaye umlinganiswa ophambili uqala ukudibana nazo zonke izinto ezithethayo nezinobubele ezenza ubuhlobo kunye naye. Emva kokungaqondani kunye neRhamncwa, uBella uyasinda kwinqaba. Embindini wehlathi udibana neengcuka ezithile ezilambileyo ebeziza kumhlasela, ngalo mzuzu iRhamncwa libonakala limhlangula. Eso siganeko saphawula ukuqala kobuhlobo obukhulu njengoko uBella wabuyela kwibhotwe kwaye waqala ukonwabela ukuhlala kwakhe kulo.
Ngeli xesha elalini, UMaurice wayezama ukufumana uncedo olufunekayo ukuze ahlangule intombi yakhe. Nangona kunjalo, wayengenakukholisa nabani na ukuba amncede de uGastón abe noluvo lokumtyhola ngesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nokumnyanzela uBella ukuba amtshatele endaweni yokuthintela ukuvalelwa kukayise kwisibhedlele sabagula ngengqondo.
Emuva ebhotwe, iRhamncwa lithathe isigqibo sokuququzelela isidlo sangokuhlwa esikhulu sikaBella, wayemthandile kwaye wayefuna ukuba uthando lwakhe lwalubuyiselwa. Ekupheleni kokuhlwa, iRhamncwa linika uBella ukuba abone utata wakhe ngesipili somlingo kwaye afumane umfanekiso ongathandekiyo katata wakhe kwimeko enzima; ke irhamncwa liyalikhulula ukuze liye kumhlangula. Uyinika isipili aze ashiye inqaba, eshiya irhamncwa kunye nabo bonke abakhonzi bebuhlungu. Ithemba lokwaphula isipelingi lalisele limkile kwaye nexesha laliphelile.
Xa uBella efumana utata wakhe, umsa ekhaya ukuze amkhathalele. Kwimizuzwana kamva uGastón ubonakala nogqirha ovela kwisibhedlele sabagula ngengqondo etyhola uMaurice ngobugeza, abemi abaninzi bedolophu behamba nabo. UGastón wenza isipho sakhe: Isandla sikaBella ngokutshintshisa inkululeko kayise. UBella uyala kwaye ubabonisa irhamncwa ngesipili somlingo ukujonga ukuba utata wakhe uphilile na. Bephenjelelwe nguGastón, abantu basezidolophini bagqiba kwelokuba babulale irhamncwa kuba bembona eyingozi. U-Bella uzama ukuthintela ukuleqa kwaye uzivalele kwigumbi elingaphantsi, nangona kunjalo ekwazi ukubaleka umbulelo kwi-Chip, ikomityi yokuthetha eyamlandela xa eshiya inqaba kwaye baqala uhambo olubuyela enqabeni ukuya kulumkisa irhamncwa.
Abemi benqaba bayaqonda ukuba isoyikiso besisondela, bacacisa isicwangciso sokuhlaselwa kwaye bayakwazi ukugxotha bonke abemi ngaphandle kukaGastón. Wayezimisele ukubulala irhamncwa u-Beauty awayethandana nalo., ke xa eyifumene, kuqhubeka umlo omkhulu. UBella uyakwazi ukubabona ngeso lengqondo xa efika kwinqaba kwaye ebaleka emisa umlo.
Okwangoku iRhamncwa libona uBella kwakhona, wabuya wanomdla wokuphila kwaye kumzuzu wokuphazamiseka, uGastón wamhlasela ngasemva, evelisa inxeba elibulalayo. Kule mizuzu ilandelayo, uGastón uyafa xa esiwa kwenye yeenqaba ezinde. UBella ubalekela ukunceda irhamncwa kwaye xa evuma uthando lwakhe, ulahlekelwa yingqondo kwaye uBella uyakhala ngokukrakra. Imizuzwana kamva, imvula yokukhanya iqala ngokutshintsha kancinci Isilo sibe yindoda entle, UBella uyamazi kwangoko kwaye batywina uthando lwabo ngokumanga. Umlingo wophukile kwaye bonke abahlali baba ngabantu kwakhona.
Ungumlinganiswa ophambili odumileyo imuvi yealaddin, ekhutshwe ngo-1992, ibali lokuqala liyinxalenye yencwadi ethi The Thousand and One Nights yemvelaphi yaseSyria eyaguqulelwa ngu UAntoine inyongo.
UJasmine uyinkosazana yesixeko saseAgrabah, uziva ehluthwe bubomi obugcwele zizithintelo ezibandakanya isikhundla sakhe sasebukhosini, ke ugqiba kwelokuba abaleke kwibhotwe enxibe njengomntu oqhelekileyo. Kukolunye lweendlela apho adibana khona no-Aladdin, isela eliselula elinomhlobo osenyongweni wenkawu. Bachitha ixesha lasemva kwemini bekunye kwaye bancokola bade bayazana, ekupheleni kwemini u-Aladdin ubanjiwe. Inkosazana ityhila ubunikazi bayo kwaye inyanzelisa ukukhululwa komhlobo wayo, nangona kunjalo amagosa ayaxolisa esithi yi-Jafar ngqo kwaye ayinakuphikiswa. Ngokukhawuleza uJasmine uya kuJafar ukuya kufuna ukuba uAladdin akhululwe, nangona kunjalo uJafar uxokile kuye esithi ubulewe.
U-Aladdin uyasinda kwaye uthunyelwa kwimishini apho afumana isibane somlingo kunye nekhaphethi ephaphazelayo. Isibane sasithathe i-genie eyayiza kunika inkosi yayo iminqweno emithathu. Ke ugqiba kwelokuba amlandele uJasmine wakhe amthandayo kwaye ufuna ukuba yinkosana. I-genie inika umnqweno wayo ukuze ibe nethuba lokuzimasa ebhotwe ukuze iyokutshata inkosazana kwaye ibe nethuba lokuyitshata. Emva kohambo lothando UJasmine uyamazi kwaye uAladdin uyachaza ukuba usebenzisa nokunxiba njengabantu abaqhelekileyo ukubaleka ubomi bakhe.. Bathandana kwaye bagqiba ekubeni batshate.
Xa uJafar efumana isibane somlingo, ufumanisa into ebukhali ka-Aladdin kwaye asithathe isixeko: uthimba isultan kunye nenkosazana kwaye atyhile ubunyani bokwenene buka-Aladdin. Ekugqibeleni umntu okhohlakeleyo uba ngoyena mntu ubalaseleyo kwindalo iphela ngomnqweno wakhe kwaye utshixelwe kwisibane somlingo ngomgibe. Inkosazana ekugqibeleni iyakwazi ukudibana nesithandwa sayo u-Aladdin kwaye bafumane imvume yokutshata.
Nguye kuphela inkosazana enemvelaphi yobuhlanga baseMelika. Kukhutshwa ngofundo ngo-1995 Kwaye yenziwa nguGlen Keane.
Ungumfazi omncinci onomoya okhululekileyo kunye namandla amaninzi. Uyintombi endala yenkosi yesizwe kwaye ebesebenza ebuntwaneni kunye negorha elibalulekileyo eligama linguKocoum; Nangona kunjalo akaze eve uthando lokwenene ngaye.
Xa abahlali befika kwilali yakhe, udibana noJohn Smith, aqala naye ubuhlobo kwaye kamva iimvakalelo zakhe ziyanda. Xa i-princess's fiance iyayiqonda le meko, icela umngeni kuJohn kumdlalo apho uKocoum asweleke khona. Isizwe sithatha uJohn simenze ibanjwa simgwebele ukufa.
UPocahontas usindisa isithandwa sakhe ekubulaweni, nangona kunjalo uthando lwakhe alunakuqhubeka njengoko uJohn Smith kufuneka emkile eLondon kwaye akakwazi ukumkhapha. Uthando lwabo lumisiwe kwaye bathi ndlela ntle.
Wabonakala kwiscreen esikhulu kwi1998, Ungumfazi okhaliphileyo onemvelaphi yaseAsia Kwaye ngaphandle kokuba anaso nasiphi na isihloko sobukhosi, uyonyuselwa kwinqanaba lokuba yinkosazana ngenxa yento entle ephunyezwe lilizwe lakhe.
Iyelenqe liyaqhubeka ngexesha lemfazwe apho usapho ngalunye lwalufuneka luthumele indoda edabini. Ngeli xesha, uMulan wayephantsi koqeqesho lokuba ngumfazi wexesha elizayo. Wayengonwabanga ngekamva lakhe elimiselweyo kwaye wagqiba kwelokuba abaleke ekhaya ayokunceda abantu bakhe emfazweni. Uzenza ngathi uyindoda yosapho kwaye uqala ukulungiselela kwakhe ukulwa.
Emva kokuphazamiseka okuninzi, ekugqibeleni ufumana izakhono eziyimfuneko kwaye enkosi kuye nakumaqhinga akhe, bayakwazi ukuphumelela idabi kwaye kuthintela ukufa koMlawuli. Abantu bayaziqonda izenzo zakhe zobuqhawe kwaye bayamkhumbula ngokunika isithuba esibalulekileyo emkhosini, angavumiyo ukubuyela kusapho lwakhe.
Ungumlinganiswa ophambili kwifilimu iTiana y el Sapo, eyakhutshwa ngo-2009. Uphawuleka ngokuba yinkosazana yokuqala enemibala kwilizwe leDisney. Isekwe kwincwadi ebhalwe ngu-ED Baker kunye nabazalwana uGrimm.
UTiana ngumncedisi omncinci ophupha ngenye imini enendawo yakhe yokutyela, wayenendawo efanelekileyo engqondweni. Nangona kunjalo, wafunda ukuba lendawo yayiza kuthengiswa kumntu ohlawula kakhulu kwaye umbono wakhe utshatyalalisiwe.
Kulapho ke wadibana khona neNkosana uNaveen, yajika yaba nguceba ukukhokela ubomi obupheleleyo, obungenankathalo nobonqenayo. Inkosana yayiza kuyigcina le fomu de ifumane ukwanga, ke iqinisekisa uTiana ukuba amange ngokumnika inxenye yobutyebi bakhe ukufezekisa iphupha lokuba ngumnini werestyu yakhe yokutyela. Uyamkela kodwa icebo lihamba kakubi kunye noTiana baphela baba li-amphibian, ke bobabini baya kwi-adventure bekhangela umfundisikazi we-voodoo ukucela uncedo.
Uhambo lwalugcwele zizifundo zobomi kwaye baphela bethandana nobuntu babo ke ngoko bathatha isigqibo sokutshata, nokuba bekwimo yabo yobuqhetseba. Okumangalisayo kukuba, ngokutywina umtshato wabo ngokumanga, bobabini abalinganiswa babuyela ekubeni ngabantu kwaye uTiana uba yinkosazana.
I-Tangled, sisihloko sefilimu apho adlala khona kwaye ikhutshwa ngo-2010. Isekwe kwelinye lamabali adalwe ngabazalwana bakaGrimm. Yifilimu yokuqala yeDisney yenkosazana ikhompyuter eveliswe ngoopopayi be3D.
URapunzel ubonakaliswa ziinwele zakhe ezinde ezimhlophe. Kwaye ibali lisibalisela ngokuzalwa kwakhe kunye nomnyhadala owenziwa ngookumkani ukumzukisa, nangona kunjalo ubanjiwe kwaye wakhuliswa nguGothel okhohlakeleyo owamgcina ethinjiwe kwinqaba ukuze asebenzise amandla omlingo awayeneenwele zakhe. Kwiminyaka eli-18, inkosazana yayihlala phantsi kwenkolelo yokuba uGothel ngumama wakhe kwaye nokuba umhlaba ungaphandle uyingozi kakhulu.
Ngeli xesha enqabeni yomkhosi bekuphangiwe, elinye lala masela libaleka lifumana indawo yokusabela apho uRapunzel wayefihlwe khona ehlabathini. Uthatha isigqibo sokukhwela kwinqaba, ke inkosazana ilwa umva kwaye yankqonkqoza engekho zingqondweni. Emva kwexesha, uqokelela amandla okuphuma aye kwilizwe langaphandle, afumanise inyani yexesha lakhe elidlulileyo kwaye athande nesela eligama linguEugene athe watshata naye ekugqibeleni.
Umlinganiswa ophambili wefilimu ongenakoyiswa, uMerida yindlovukazi ekwishumi elivisayo eneenwele ezibomvu, ibali lakhe lenziwa nguBrenda Chapman kwaye wabekwa eScotland kumaxesha aphakathi. Yaphuhliswa nguPstrong noDisney.
Isimilo sakhe esingxamisekileyo simnyanzela ukuba afune ukuzenzela izigqibo ebomini ukusukela oko abazali bakhe bathembisa isandla sabo emtshatweni nonyana womnye wabahlobo bakhe, unyango alunqabayo u-Mérida kwaye oludala isiphithiphithi ebukumkanini ngenxa yomceli mngeni wesiko. .
Inkosazana ifuna uncedo kwixhegwazana elixoxa nayo ukuze litshintshe ikamva lalo ngomlingo, olimguqula libe libhere. Ngoncedo lukanina, bafuna ukubuyisa umlingo ngothotho lweziganeko ezenza iMérida ifunde ezona zinto zibalulekileyo ebomini.
Ibali likaMerida lahlukile kuleyo yamanye amakhosazana eDisney, ayigxininisi kuthando analo ngenkosana. Endaweni yoko, ithetha ngakumbi malunga nobudlelwane bobuzalwana phakathi kwabantakwenu nabazali, ngendlela efanayo ejongene nemicimbi yangoku enje ngemvakalelo yenkululeko kunye nemvukelo enokubonakaliswa ngabakwishumi elivisayo.
Kuba amabali asasebenza, I-Disney ithathe isigqibo sokuphinda iphinde ivelise iinguqulelo zesenzo esiphumelelayo: I-Cinderella ngo-2015 kunye no-Beauty kunye ne-Beast ngo-2017. Kubhengezwe ukuba iinguqulelo zika-Aladdin no-Mulan ziya kukhutshwa kule minyaka ilandelayo.
Baphi abanye iiNkosazana zeHlabathi zeDisney?
Ukongeza kwiiNkosazana zeDisney ezenza ilungelo lokuthengisa, baninzi abanye abanamabali afanelekileyo esi sifundo. Injalo imeko ka-Elsa no-Anna (Frozen: ubukumkani bomkhenkce), kunye neNkosazana uSofia, iMoana, iMegara (iHercules) kunye ne-Esmeralda (iHunchback yeNotre Dame). Nangona kunjalo, awathathelwa ngqalelo ngaphakathi kwilungelo lokuthengisa ukusukela oko ukumiliselwa kwabo bekungoku nje okanye kungaphumelelanga, kukwabangelwa kukuba abanye banempumelelo enkulu bebodwa.
Nangona kunjalo, Kusenokwenzeka ukuba baya kuthweswa isithsaba kule minyaka imbalwa izayo okoko i-franchise ihlala ihlaziywa rhoqo oko kubandakanya isinxibo ukuya kumalungu amatsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » Cine » Amagama eeNkosazana zeDisney